အိန္ဒိယသွားကြဖို့လမ်းရှိပါတယ်. ဒါဟာများအတွက်စံပြနမူနာတစ်ခုမှာကြီးစွာသောအိန္ဒိယကြက်တောင် Player ကိုဖြစ်ပါတယ်- : P V ကို Sindhu.
Pusarla Venkata Sindhu အိုလံပစ်ပွဲတော်၌အကြှနျုပျတို့၏နိုင်ငံတွေအတွက်ငွေတံဆိပ်ဖမ်းပြီးမှပထမဦးဆုံးအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်. Saina Newal ပြီးနောက်, : P V ကို Sindhu အစဉ်အဆက်အနေနဲ့အိုလံပစ်ဆုတံဆိပ်အနိုင်ရဖို့အတွက်လာမယ့်အိန္ဒိယကြက်တောင်ကစားသမား.
: P V ကို Ramana နှင့် P ကို ​​- P ကို ​​V ကို Sindhu မိမိတို့၏အချိန်များအတွက်အကောင်းဆုံး volley ကစားသမားတွေထဲကမှဖွားမြင်ခဲ့သည်. Vijaya. ဒါဟာ P ကို ​​V ကို Ramana ဂိမ်း၌သူ၏ထူးခြားပြောင်မြောက်မှတ်တမ်းများအဘို့အ Arjuna Award ဆုလက်ခံရရှိကြောင်း noteable သည်နှင့် Sindhu ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလှုံ့ဆော်မှုသူမ၏မိဘများခဲ့သည်.
နောက်ပိုင်းတွင်, Pullela Gopichand ၏အောင်မြင်မှုကိုအားဖြင့်မှုတ်သွင်း, ၏ဆုရှင်သူကိုခဲ့တယ် 2001 အားလုံးအင်္ဂလန်ပွင့်လင်းကြက်တောင်ချန်ပီယံရှစ်. နှင့်, ထိုသို့သူမ၏အသက်အရွယ်ခဲ့သည် 8 ပြီးတော့ထံမှ P ကိုအပေါ် V ကို Sindhu ကြက်တောင်ကစားစတင်.
အဆိုပါအားကစားအပေါ် Sindhu ရဲ့အစောပိုင်းသင်တန်းနှင့်နည်းပြ Secunderabad အတွက်အချက်ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏အိန္ဒိယမီးရထား Institute ၏ကြက်တောင်တရားရုံးများမှာ Mehboob လီများကပေးသောခဲ့သည်. နောက်ပိုင်းတွင်, Pullela Gopichand ရဲ့ Gopichand ကြက်တောင်အကယ်ဒမီသူမကဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး.
: P V ကို Sindhu ၏ benchmarks:
: P V ကို Sindhu အောက်ပါမှတ်တမ်းများနှင့်အောင်မြင်မှုများမှတဆင့်အိန္ဒိယအားကစား၏သမိုင်းအတွက်သူမ၏ခြေမထုတ်မှတ်သား:
Sindhu အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာစင်မြင့် finish ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအငယ်ဆုံးအစဉ်အဆက်ကအိန္ဒိယဖြစ်ပါသည်, များလွန်းသည်ဟု, တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်အတွက်
သူမသည်အိုလံပစ်ကြက်တောင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးရောက်ရန်ပထမဦးဆုံးအိန္ဒိယ Shuttler ဖြစ်ပါသည်
Sindhu သည့်ကြက်တောင်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံမှာတံဆိပ်အနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် (အမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အတွက်)
၏နှစ်အရွယ်မှာ 17, သူမသည်ထိပ်ဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည် 20 အဆိုပါ BWF ကမ္ဘာ့ကစားသမားအဆင့်နှင့်သူမသည်အိန္ဒိယအားကစားသမိုင်းအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ပုံ
ယခုနှစ်အတွက်သူမ၏တစ်ဦးအမြင့်ဆုံးအားကစားဂုဏ်အသရေအဖြစ်က marking ရာဂျစ်ဂန္ဒီ Khel Ratna နှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့သည် 2015
တနှစ်တွင် Padma Shri ဆုကိုရရှိထားသည့် 2015 နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စတုတ္ထအမြင့်ဆုံးအရပ်သားဂုဏ်အသရေကိုလက်ခံရရှိရန်အငယ်ဆုံးလူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်
Arjuna Award ဆုအတွက်ရရှိထားသည့် 2013
သူမသည်တစ်နှစ်တာ၏ FICCI အောင်မြင်မှုများအားကစားသမားများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရ 2014
သူမလည်းဂုဏ်ယူစွာယခုနှစ် NDTV အိန္ဒိယအဖြစ် annnounced ခဲ့သည် 2014
အပြင်ကဤမှသည်, သူမအတောမသတ်အိန္ဒိယအမျိုးမျိုးပြည်နယ်အစိုးရများကဆုခခြံခဲ့ရ, အမျိုးမျိုးသောအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အမျိုးမျိုးသောနာမည်ကြီးတွေအားဖြင့်. အားကစားများအတွက်သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အကြီးမြတ်မိန်းမသည်မာနထောင်လွှားတွေအများကြီးဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ. : P V ကို Sindhu တစ်အားကစားအမျိုးသမီးအဖြစ် Nation များအတွက်လုပ်ဖို့အများကြီးပိုရှိပြီးသူမကကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တခြားလူငယ်တွေကို icon တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိ.
« တစ်ဦးကကောလိပ်ဒီဂရီအွန်လိုင်းရယူနိုင်သောလုပ်နည်း ?
မင်္ဂလာ Pongal ပုံများ 2017, ဆန္ဒရှိသော်လည်း Quotes ကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျများ Whatsapp အခြေအနေ, Facebook ကို DP »